एएए क्रेडिटको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki एएए क्रेडिट
कम से कम ग्रीस को आर्थिक संकट पछि, यो थाहा छ कि एजेन्सीहरु द्वारा उनको क्रेडिट रेटिंग को आधार मा मूल्यांकन कसरि गरिन्छ। यो दर्जाको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर यो मात्र प्रभावित छैन देशहरू, तर पनि कम्पनीहरू, विशेष गरी ठूला कम्पनीहरू। क्रेडिटको दर्जाको उच्च मूल्याङ्कन ट्रिपल ए, अर्थात् एएए हो। यो बैंकहरूको लागि एक महत्वपूर्ण प्यारामिटर हो, वित्तीय बजारको लागि र लगानीकर्ताहरूको लागि। तर एएए के मतलब छ?
यसको मतलब एएए क्रेडिट
यदि एक राज्य वा कम्पनी एएए मूल्याङ्कन गरिएको छ भने, यसको उच्चतम क्रेडिट मूल्याङ्कन छ। लगभग0प्रतिशतको सम्भाव्यतासँग मूल्याङ्कनको लागि उत्तरदायी एजेन्सीहरूले क्रेडिटको डिफल्टलाई संकेत दिएको छ। एकैले एएए को एक मोन्डेसेचेरानलाइज को मूल्यांकन को लागी बोल्छ, ठीक छ किनकी वहाँ क्रेडिट विफलता को लगभग कुनै जोखिम छैन। निस्सन्देह, प्रश्न उत्पन्न हुन्छ किन यस्तो मूल्यांकन सबै मा बनाइन्छ? यो जवाफ धेरै सरल छ, खासकर राज्यों को मामला मा या धेरै सहायकहरु र संरचनाहरु संग ठूलो कम्पनीहरु को, क्रेडिटशीलता धेरै चाँडै निर्धारण गर्न सकिँदैन। यसबाहेक, वार्षिक र वित्तीय खाताहरूले उनीहरूको पूरै वास्तविक वित्तीय स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्। अक्सर यी मात्र अस्थायी अंश हुन्। एएए, एक पुरा तरिकाले परीक्षा र साथसाथै एक दीर्घकालिक भविष्यवाणी को रूप मा एक अनुमान को मामला मा छ। यसो गर्दा सबै कम्पनीहरू जस्तै कम्पनीको सूची, अर्डर अवस्था, मुनाफा, gearing, मुद्रा जोखिम र धेरै अधिक। मूल्याङ्कनहरू केवल कम्पनी र देशहरूका लागि होइन तर संस्था, व्यक्ति वा निश्चित वित्तीय उत्पादनहरूको लागि पनि प्रतिभूतिहरू प्रयोग गरिनेछ। जहाँ यो कुरामा जोड पर्दछ, यो मूल्यांकन त्यहाँ विभिन्न एजेन्सीहरू छन्। बिस्तारै छैन, त्यहाँ विभिन्न ग्रेडहरू छन्, यद्यपि विवेकहरू प्रायः साना नै हुन्छन्।
एएए क्रेडिट पनि गुमाउन सक्छ
पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, एक हो एएए क्रेडिट तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने सबै भन्दा उच्च चीज। जो एएए को रूप मा वर्गीकृत गरिन्छ, यसैले महान फायदाहरु लाई आनंद ले रहे हो। यो केवल जब तपाईं एक बैंक मा एक ऋण चाहन्छ जब ध्यान दिछन। धेरै राम्रो रेटिंग द्वारा अस्वीकार, एक मात्र बैंक को एक ठूलो चयन छैन, तर एक पनि एएए क्रेडिट धेरै अनुकूल ब्याज दर संग हुन्छ। नतीजाको रूपमा, एएए क्रेडिटको रूपमा ऋणहरू बनाइएका छन्, जसले गर्दा कम्पनी वा एक राज्यको ऋण स्तरमा सकारात्मक योगदान दिन्छ। निस्सन्देह, तथापि, कम्पनीको व्यवस्थापनमा गलत खर्च र गल्तीहरूको कारण वा राज्यमा गलत निर्णयहरू, एएए क्रेडिटको मूल्य पनि गुमाउन सक्छ। त्यसैले तपाईंलाई एएए मूल्याङ्कनको स्थायी मर्मतको लागि केहि गर्न पर्छ। एक स्नातक काफी आर्थिक परिणाम संग सम्बद्ध हुन सक्छ। प्रत्येक स्नातकसँग युग्मित मात्र उच्च ब्याज दरहरू होइन, तर यो वित्तीय बजारमा पनि सबै पैसा तिर्न भारी हुनेछ। यसले स्वाभाविक रूपमा ऋणको डिग्री बढाउँछ। तपाईं एक एजेन्सीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब मूल्याङ्कन हो। डी र तीन चोटीको दर्जा DDD अपमानिता र ईर्ष्याको दस्तावेजहरू दर्ता गर्दछ। जहाँ प्रायः वित्तीय बजारमा बीबीको मूल्याङ्कन संग कुनै बढी क्रेडिट हुन्छ र यसरी D र तीन पटक डीडी रेकर्ड गरिएको छ।
अघिल्लो लेखपरिवर्तनीय बन्धन